Itiyoopiyaan Baatii Adoolessaa Keessa Ittisa Laga Abbayyaa Bishaan Yoo Guutte Nageenya Koof Sodaachisaa Dha, Jetti Sudan
Guraandhalaa 08, 2021
Itiyoopiyaan ittisa laga Abbayyaa kan projektii humna bishaanii isee guutuuf tarkaanfiin qofaa ishee fudhattu kam iyyuu nageenya biyyoolessaa Sudaan balaaf kan saasilu ta’uu, ministeerri jal’isii fi qabeenya bishaanii Sudaan Yaasir Abbaas sambata darbe beeksisanii jiran.
Sudaan dhimma ittisa Abbayaa ilaalchisee marii Masrii, Sudaanii fi Itiyoopiyaa gidduutti danqamee jiru Yunaayitid Isteetis, gamtaan Awrooppaa, Tokkummaan mootummootaa fi Gamtaa Afriikaa jaarsummaan akka gidduu seenan gaafachuu ishee Abbaas gaaffii fi deebii Rooyiters waliin geggeessaniin beeksisaniiru.
Yaadi isaanii kun kan dhaga’ame lafa qonnaa falmisiisaa daangaa Itiyoopiyaa fi Sudaan irra jiru ilaalechisee muddamni hammaatee ennaa jirutti.
Gamtaan Afriikaa dhiyeenya dhimma ittisa laga Abbayaa ilaalchisee Itiyoopiyaa, Sudaanii fi Masrii gidduutti mariin akka geggeessamu kan waame yoo ta’u irra deddeebi’uun danqamee jira. Waggaa darbe illee mariin jaarsummaa Yunaayitid Isteetisiin geggeessame utuu hin milkaa’in hafe.
Abbaas akka jedhanitti "Sudaan yeroo ammaa ejjennoo ishee ifa gochuuf akkasumas furmaataa fi dirqama seeraa irra ga’uuf duula diplomaasummaa fi siyaasaa geggeessuu jalqabdee jirti. Fedhiin siyaasaa jiraannaan, furmaata waliinii irra ni ga’ama jennee abdanna jedhan.
Itiyoopiyaa Ilaalchisuun Gamtaan Awrooppaa Ibsa Baase
Tokkummaan Mootummootaa Interneetii Cufuun Seeraan Ala Odeeffannoo Argachuu Quunnamtii Jiru Danaqa Jedhe
Baqattoonni Ertiraa Tigiraay Keessa Jiran Ammallee Yaaddoo Akka Qaban Dubbatu
Boordiin Filannoo Biyyoolessaa Akka Miseensonnii fi Caasaan Dhaabichaa Akka Korri Sabaa Waamu Dhiibbaa Godhan Gaafate
Prezdaant Baaydin Hoggantoota Gamtaa Afrikaatif Dhaamsa Dabarsan